गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिका क्षेत्रीय विज्ञ सम्मेलन शनिवार देखि सुरु हुदैं – newslinesnepal
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिका क्षेत्रीय विज्ञ सम्मेलन शनिवार देखि सुरु हुदैं
प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार १८:५०
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिका क्षेत्रीय विज्ञ सम्मेलन शनिवार देखि सुरु हुदैंछ । तीन दिन सम्म चल्ने सम्मेलनको उद्धघाटन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले गर्ने कार्यक्रम तय भएको गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिका क्षेत्रीय संयोजक राजन त्रिपाठीले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणका कारण सो सम्मेलन जुम प्रविधीद्धारा आयोजना हुने गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ । यसअघि सो सम्मेलन फेस टु फेस क्यानाडामा गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
सम्मेलनका बिशेष अतिथिहरुमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, अमेरिकाका लागि नेपाली महामहिम राजदूत डा. अर्जुन कार्की, क्यानाडाका लागि महामहिम राजदूत भृगु ढुंगाना र नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री बालकृष्ण खाँण, संघका पूर्वअध्यक्षद्धय जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, एनआरएनए आइसिसीका पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्य, वर्तमान उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ लगायत रहेका छन उनीहरुले उक्त कार्यक्रम लाई सम्वोधन गर्ने छन् ।
क्षत्रीय सम्मेलन गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी महिना हुने विश्वव्यापी विज्ञ सम्मेलनको तयारी स्वरुप आयोजना गरिएको गैर आवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले जनाए ।
सम्मेलनमा कृषि, विज्ञान प्रविधी, पुर्वाधार विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इनर्जी, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरुले आआफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन् ।
उपस्थितिको लागी हार्दिक अनुरोध
ग़ैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाज क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठक तथा ज्ञान सम्मेलन सेप्टेम्बर 4,5 र6का दिन हुन गइरहेको कुरा सर्वविदितै छ । यसपटक यो क्षेत्रवाट एनआरएनए क्यानडा आयोजक रहेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत गैर आवासीय नेपालीहरूले उठाउदै आएको माग “नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्तिमा हक़ तथा प्रवासमा रहेका नेपालीका राजनीतिक अधिकार” ( Continuation of Nepalese citizenships, Property and Political Right of NRNs ) कार्यक्रम रहेको छ । सो फोरममा नेपालबाट बिभिन्न राजनितक पार्टीको माननिय नेताज्यू हरूको उपस्थित रहने छ । उक्त बिषयमा याहाहरूको कुनै जिज्ञासा अथवा सुझाव भएमा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नु हुनेछ । फ्री रजिष्ट्रेशन रहने उक्त कार्यक्रम मा आफ्नो नाम दर्ता गरिदिन समेत आग्रह गर्दछौं। साथै सो कार्यक्रममा उपस्थित हुनका लागी तल दिएको zoom link र Password प्रयोग गरी उपस्थित हुन् पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
PW :- 2020
Date :- 05 September 2020(Saturday)
Time : 09:00 (EST) (06:45 नेपाल को समय बेलुका
Source : Janasawal.com